छोरी पाउने चाहाना, नेपालको विकासबारे यस्तो सुझाव ? अनमोल केसीसँग डेट गर्न मन - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
छोरी पाउने चाहाना, नेपालको विकासबारे यस्तो सुझाव ? अनमोल केसीसँग डेट गर्न मन
काठमाडौं । हेर्दा मान्छे जस्तो छ । तर मान्छे होइन । नेपालको विकासका बारेमा सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ले नयाँ विषय जोडेकी छन् । सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ ले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रविधिले गरिबी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने सुझाव दिएकी छन् । बुधबार राजधानीमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा उनले प्रविधिको प्रयोगले सुशासन कायम राखी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने सक्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागिले साधेका प्रश्नहरुको साफियाले तरुन्तै जवाफ दिएकी थिइन । कार्यक्रमको पोडियममा उपस्थित ‘सोफिया’ सँग रोचक सवाल जवाफ गरेका थिए ।
नेपालमा प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेकोले बताउँदै उनले नेपालले प्रविधिलाई सही तरिकाले अवलम्बन गर्न सके विकास हुने बताइन । उनी मानिससरह नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट हुन् । उनलाई साउदी सरकारले ४ महिनाअघि महिलाका रूपमा नागरिकता दिएको हो ।
अनमोल केसीसँग भेट गर्न मन
मन्तव्यको उनले आफूलाई नेपालका हिरो अनमोल केसीसँग भेट गर्न मन लागेको सुनाएकी थिइन्। ‘मलाई अनमोल केसीसँग डेट गर्न मन छ’, सम्बोधनको बीच बीचमा उनले पटक पटक दाेहाेर्याइन्।
सोफियाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि आरोहण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
छोरी पाउने चाहना
गत नोभेम्बरमा सोफियाले बच्चा पाउन चाहेको बताउँदै ‘परिवार हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा’ भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। संयुक्त अरब एमिरेट्सको खालिज टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले आफूले पाउने छोरीको आफ्नै नाम दिने बताएकी थिइन्।
उनले भनेकी थिइन्, “परिवार हुनु साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। मेरो विचारमा यदि तपाईँसँग माया गर्ने परिवार छ भने तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ र यदि तपाईँको परिवार छैन भने बनाउनुपर्छ।” छोरीको नामबारे जिज्ञासा राख्दा उनले सहज ढङ्गले भनिन्, “सोफिया।”
के गर्न सक्छन् सोफियाले
यान्त्रिक युवती बोल्छिन्, सोधेको कुराको जवाफ दिन्छिन्, विवाह गर्ने परिवार बसाउने इच्छा व्यक्त गर्छिन् । सुन्दा, भिडियोमा देख्दा अचम्म लाग्छ । के यो वास्तविकता हो ? अनायास प्रश्न नै प्रश्न मनभरि उब्जिन्छ । झन् साउदी अरेबियाले गत अक्टोबरमा आप्mनो देशको नागरिकता नै प्रदान गरी इज्जत गरेको सुन्दा त अचम्म नै अचम्म लाग्छ । यी यान्त्रिक युवतीका सृष्टिकर्ता हुन् हड्ढड्ढा डेभिड हेनसन् । यान्त्रिक युवतीको शरीरमा क्यामरा जडान गरिएको छ । साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ए.आई., सप्mटवेयर पनि प्रोग्राम गरिएको छ जसको प्रयोगले उनले आई कन्टयाक गर्न सक्छिन् र मान्छे चिन्न सक्छिन् ।
सोफिया भन्छिन्– उनी र उनीजस्तै यान्त्रिक मानवहरूले जेष्ठ नागरिकहरूको प्रभावकारी ढङ्गले देखभाल गर्न सक्छन्, पार्क र बगैंचाहरूमा भिजिटरहरूको मार्गदर्शन गर्न सक्छन् र मानव जातिको जीवन अझै उत्कृष्ट बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । र अन्ततोगत्वा संसारलाई उत्कृटता प्रदान गर्न सक्छन् ।
मानवजाति सँग मिलेर बस्नु र मानवजातिलाई सहयोग गर्नु नै उनीहरूको चाहना हो । मानवलाई झर्को लाग्ने र दिक्क लाग्ने काम यान्त्रिक मानवले गर्न सक्छ । हाम्रो देशको मङ्सिर १० र २१ गतेको चुनावमा समेत पाल्पा र पोखरामा यान्त्रिक मानवको प्रयोग भएको र हुने समाचार छापामा पढन पाइएको छ । यान्त्रिक मानवलाई टोपी, इस्टकोट, पाइन्ट, माला लगाएर उम्मेदवारको रूप दिइएको छ र उम्मेदवारले जस्तै मत माग्न लगाइएको छ।
सोफियालाई सृष्टि गर्ने कम्पनी हेन्सन रोबोटिक सन् २००५ मा खोलिएको हो । यो कम्पनीको मानव आकृतिको पहिलो यन्त्र मानव ‘अल्बर्ट आइन्सटिन’ हो भने दोस्रो ‘जुल्स’ हो । त्यसपछि क्रमशः ‘जेनो’, ‘एलाइस’ हुँदै ‘ह्यान’ र ‘सोफिया’ को जन्म भएको हो । यान्त्रिक मानवलाई मानवजस्तै संवेदनशील हुन अर्थात् मानवीय भावना दिन ए.आइ. एउटा नयाँ विधाको रूपमा सशक्त ढङ्गले अगाडि आएको छ । ए.आइ.को प्रयोगले नै वर्तमान यान्त्रिक मानवहरू हाँस्ने, बोल्ने, खुशी व्यक्त गर्नेजस्ता मानवीय संवेगहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आजकल यान्त्रिक मानवलाई सवारी साधन चलाउने, खाना बनाउने, कारखानामा मजदुरजस्तै काम गर्ने, बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने, नर्स र सिस्टरहरूजस्तै काम गर्नेजस्ता अनेकौं काममा लगाइएको छ ।
रोजगार दुर्लभ हुँदै गएको बिश्वमा बेरोजगारको समस्याले झन् विकराल रूप लेला कि भनी डराउनु नै पर्छ । तर कारखानाहरूमा बढदै गएको मजदुर अराजकताको नियन्त्रणमा भने यसले सहयोग नै पु¥याउँछ । कारखानाको सबैभन्दा जटिल तथा चुनौतीपूर्ण काम नै श्रम व्यवस्थापन हो । पार्टीगत श्रमिक सङ्गठनले कारखानालाई अराजकताको अखडा नै बनाएको छ । मानव श्रमिकको विकल्प यान्त्रिक श्रमिक हुँदा कारखानाले अवश्य पनि केही न केही राहत पाउँछ ।
यान्त्रिक युवती सोफियाको सृष्टि रोबोट तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विधामा भएको द्रुत प्रगतिले गर्दा भएको हो । यो प्रगति कति वैज्ञानिकले सकारात्मक ढङ्गले लिएका छन् भने कतिले नकारात्मक ढङ्गले पनि लिएका छन् । नकारात्मक ढङ्गले लिनेहरूले यसलाई महँगो प्रविधि भन्छन्, गरिरहेको कामबाहेक फरक प्रकृतिको कामको लागि यो अनुपयुक्त नै ठान्छन् ।
विराटनगर । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलल...
भारत । युवा युवती माझ अत्यन्त चर्चित एवम लोकप्रिय ...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष...
काठमाडौं । ट्याक्सी चालकमाथि काठमाडौंको थलीमा सोमब...